Ajụjụ - Quanzhou aqua-Tech Trading Co., Ltd.
CNC Vetikal lathe Machine
Ugboro abụọ kọlụm Vetikal lathe
Manual Vetikal lathe Machine
Vetikal Gbanwere na-egweri lathe Machine
Multiple Station Nyefee Machine
Kwụ Nyefee Machine
Vetikal na kehoraizin Nyefee Machine
Vetikal Nyefee Machine
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ tinyere OA, ISO9001, Asambodo nke An
alysis / Conformance; Insurance; Mmalite, na ndị ọzọ na mbupụ akwụkwọ ebe chọrọ.
Anyị gafere ISO9001 na OA certifciation.
Gịnị banyere gị àgwà?
Site imewe site na mmepụta, aqua-tech Quality management usoro a ike n'ime bụla ebe nke anyị azụmahịa. Real-oge analysis na njikwa na-mere ofụri mmepụta usoro, ebute anyị ngwaahịa 'ngụkọta àgwà. Aqua-tech mma a na-ghọtara site multiple certifications na accreditations si anyị isi principals.
Olee banyere gị Machine Service?
Anyị ahịa ọrụ nyochaa gị iwu na a ahaziri ndabere ọ bụla ogbo n'ichepụta, nhazi na lọjistik. Ekele anyị nkesa emmepe, ozi usoro na-aga n'ihu usoro nke mgbanwe mmepe na mmepụta, anyị na-ebuli edu ndú na nnyefe ugboro n'ihi na gị na ngwaahịa.
Anyị loading n'ọdụ ụgbọ mmiri: Xiamen n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ma ọ bụ ndị ọzọ China mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ka gị requirements.The ụzọ oge na-emekarị bụ 20-60 ụbọchị mgbe na-anata ego ugwo. Special nzube igwe ga-atụle. The ụzọ ụfọdụ, irè mgbe (1) anyị natara gị ego, na (2) anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ụzọ ụfọdụ na-adịghị arụ ọrụ na gị n'obi imecha, biko gaa n'elu gị chọrọ na gị ire ere. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Site n'ige ntị gị na ịbụ mgbe niile dị na bụla ogbo gị ọrụ, anyị ahịa na oru aka ìgwè gị ndụmọdụ ma tinye ezigbo uru uru.
Drilling ịme ọpịpị Machine, Cnc Vice Spindle Collet, Pneumatic Vice agha, Floor Spring Glass Door Machine, Collet clamping,